TIPS: 25 ARTISANS oo loogu talagalay guntada dabiiciga ah - TELES RELAY
ACCUEIL » VIDEOS »TUSOOYOOYINKA: 25 ARTISANS UGU HOREYSO GUN
TALOOYINKA: 25 ARTISANS oo loogu talagalay burka
WAQOOYINKA MAXAA SOO SOCDA
Waxaad samayn kartaa qadarka xadidan ee farshaxanka adigoo isticmaalaya qoryo kulul. Tani dhab ahaantii waa qalabkii ugu fiicnaa ee lagu abuuro lana dayactiro wax kasta oo ku hareereysan gurigaaga. Had iyo jeer ka taxadar adigoo isticmaalaya qoryo kulul oo kulul si looga fogaado gubashada. Xeerka ugu muhiimsan waa inaad ku iibsato qori sharaf ah oo gacanta ku habboon, taasina waxay noqon doontaa mid raaxo leh in la isticmaalo. Dhammaan xirfadaha aad ka heli kartid fiidiyowkani waa kuwo aad u fudud waxayna ku habboon yihiin bilowga iyo xirfadleyaasha.
Samee muraayado madadaalo leh qoryaha sonkorta kulul! Raac jaantuskayaga iyo sawirada muraayadaha qaabka aad jeceshahay warqad soo dejin. Qaado qori dhalada kulul si aad u abuurto muraayadaha cusub. Waxaad isticmaali kartaa muraayadahaas muusiga sawir qaadashada sawirada saaxiibtinimo ama xitaa ku toosi saaxiibbadaa! Ogow sida aad carrabkaaga uga sameysid waraaqo iyo koolada kulul. Waxaad samayn kartaa hilqado qurux badan leh oo leh koolo kulul. Dhegahaani waxay ku haboon yihiin wax kasta oo guga ah oo qurux badan! Daawo barashada! Waxaan jecelnahay inaan sameyno waxyaabo kala duwan oo waxyaabo qaali ah leh. Waxaad samaysan kartaa kareemooyin dabiici ah oo ka sameysan leh ulaha kulul! Iska yaree xabo kulul si aad u siiso qaabka prismka. Cabbirrada midabka leh adoo isticmaalaya calaamadeeyaha isla markaana isku dheji si ay u abuuraan daroogo. Fiiri fiidiyowgeena iyo baro sida loo abuuro t-shey midab leh adigoo isticmaalaya qoryo kulul.
Mashruuc kale oo xiiso leh ayaa ah in la sameeyo kiis telefoon oo leh qori kulul iyo xadhig. Ku duub qalabkaaga casriga ah. Ku dheji silig si aad u gelisid qalabka dhegeysiga ee xabagta xabagta oo si sahlan u samee kiis telefoon. Ma u baahan tahay qolofta guriga laakiin ma rabto inaad lacag badan ku bixiso? Ka samee jilciyaha guriga adoo isticmaalaya qalin kulul! Waxaad ka dhigi kartaa dhufaysyo adiga oo isticmaalaya qalabka dabaysha kulul!
00: 09 Muraayado Kubir leh
01: 31 Sawirada Kalluunka ee la daabacay
03: 24 Qurxiyo qurux badan
05: 08 Kiis telefoon oo leh koolo kulul
07: 11 DIY waaskada qubeyska
10: 22 DIY ah
Waxaad iska diiwaan galisaa 5-daqiiqado farshaxan ah: https://goo.gl/fWbJqz
Isku-duwo 5 daqiiqo KIDS Shandadaha: https://goo.gl/PEuLVt
Isku-dubarid Shaqooyinka laga bilaabo 5 daqiiqo MEN: http://bit.ly/2S69VUG
Nidaamka wanaagsan ee Youtube: https://goo.gl/rQTJZz
Wixi fiidiyo iyo maqaalo ka badan, booqo:
Cudurka Suuxdinta Muuqda: https://www.epidemicsound.com/
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=bVPaqcEZfts
10 FILMS HORROR FILMS OO LAGU QAADAY MID KA BADAN YAHAY REER REAL | Lama Faché - VIDEO
Laurent Blanc: "Dhab ahaantii kursiga keydka sannadka soo socda, waxaan rajeynayaa" - VIDEO